Dhaqdhaqaaqa ardayda dugsiga sare ee Gabon: joojinta dib-u-habeynta deeqaha iyo dib-u-gurashada fasallada - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Dhaqdhaqaaqa ardayda dugsiga sare ee Gabon: joojinta dib u habeynta deeqaha iyo dib u soo kabashada fasallada - JeuneAfrique.com
Dhaqdhaqaaqa ardayda dugsiga sare ee Gabon: joojinta dib-u-habeynta deeqaha iyo dib-u-soo-celinta fasallada - JeuneAfrique.com
Wasiirka Gabon of Education, Michel Menga ii Essonne, ayaa ku dhawaaqay joojinta deeqaha dib u habaynta in uu keeno hore April ee bannaanbaxyo dugsiga ee magaalooyinka waaweyn ee Gabon ah, iyo sidoo kale koorsooyinka joojinta.
deeq u habaynta The "ma codsan doonaa sanadkan (iyo) dawladdu ku dhawaaqday dib fasalada on Thursday, April 19 2019 dhulka oo dhan," ayuu yiri Michel Menga Tuesday Me Essonne, Wasiirka Waxbarashada , telefishanka.
Toddobaadkii hore, kumanaan arday ayaa waxay wadeen waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka ka soo horjeeda qaraar si wax looga beddelo xeerarka lagu abaalmarinayo deeqaha waxbarasho.Celui 19 u go'an da'da ugu badan inay u soo baxaan iyo waxay u baahan tahay ugu yaraan celcelis 12 saxaarad guud halka arday badan dib uga dhicin in waxbarashadooda, uu yimid ka dib markii jaamacadda 20 sano.
Ka dib saddex maalmood oo dibad-baxyo ah, ayay xukuumaddu ku dhawaaqday in la xirayo dhammaan dugsiyada "ilaa ogeysiis dheeri ah". Waxa uu sidoo kale qaatay qaraar qabyo ah oo cusub oo lagu xalinayo da'da ugu sarreysa ee 27 si loogu gudbiyo qalabka farsamada iyo farsamada iyo helitaanka deeq waxbarasho.
Ka jawaabista dibad-baxyada, wasiirka ayaa la kulmay wakiilada waalidiinta iyo waalidiinta Axadda iyo Isniinta si ay isugu dayaan inay wadaagaan jawi caadi ah. Intii lagu guda jiray wadatashiyadaas, daneeyayaasha kala duwan waxay ku jireen, waxyaabo kale, waxay soo xusheen codsiga degdegga ah ee tallaabadan.
Talaadadii, Michel Menga M'Sesnene ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in koox shaqeyneysa ay qorsheyneyso in ay ka fekerto "qaababka hirgelinta horumarka isbedelka".
"Muhiimada ugu weyni waxay ahayd in la soo celiyo daganaashaha, iyo in carruurtu ay dib ugu noqdaan fasalka," ayuu ka sheegay Arbacada Madaxtooyada Xiriirka waalidiinta ee ardayda iyo ardayda Gabon, René Mezui-Menie. "Waxaan soo dhoweyneynaa wadahadalka furitaanka ee xukuumadda waxayna sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan iyaga, iyagoo rajeynaya inay dib u eegaan da'da iyo celceliska," ayuu raaciyay.
"Ka hor inta aynaan carruurta waydiisan heer sare, waxaan u baahanahay inaan hagaajino xarumaha soo dhawaynta iyo tababarka macalinka," ayuu yiri. Dib u qaabaynta xaaladaha darto in deeqaha la soo bandhigay, sida laga soo xigtay dawladda, si ay u muujiyaan "horumarka dhaqaale ee hadda" ee dalka halka Gabon ee lagu dhibaato dhaqaale qoto dheer tan iyo dayrta ee qiimaha saliidda ee 2014. Qorshaha gargaarka dhaqaalaha ee ka socda Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta (IMF) ayaa la siiyay 2017 ee Gabon iyada oo laga beddelayo hoos u dhaca kharashka dawladda.
ardayga dugsiga sare
dib u habaynta
Madaxweynihii hore ee Peru Alan Garcia ayaa isdilay kahor inta uusan xirmin
Ka ganacsiga lafaha bani-aadamka wuxuu si fiican u qabtaa gobollada Bariga iyo Adamaayo